amathuluzi wokuhlola wokusebenza womthombo ovulekile aphezulu ayi-10
none Ukusebenza Amathuluzi wokuhlola ukusebenza komthombo ovulekile aphezulu ayi-10
Amathuluzi wokuhlola ukusebenza komthombo ovulekile aphezulu ayi-10
Ukuhlolwa kokusebenza kuba yingxenye yenqubo yentuthuko, ngakho-ke kubalulekile ukwazi ukuthi yimaphi amathuluzi akhona lapho. Lokhu okuthunyelwe kuqukethe uhlu lwamathuluzi wokuhlola wokusebenza komthombo ovulekile aphezulu ayi-10.
Amathuluzi Wokuhlola Ukusebenza Komthombo Ovulekile
Uhlelo lokusebenza lwe-Apache JMeter luyisoftware yomthombo ovulekile. Kuluhlelo olumsulwa lweJava olwenzelwe ukulayisha ukuhlolwa kohlelo nokulinganisa ukusebenza kwalo. Funda kabanzi '
I-Gatling iyithuluzi lokuhlola umthwalo elinamandla kakhulu. Yenzelwe ukusetshenziswa kalula, ukulondolozwa nokusebenza okuphezulu. Funda kabanzi '
Inkumbi iyithuluzi lokuhlola ukulayishwa komthwalo okusebenziseka kalula, nokusatshalaliswa. Yenzelwe amawebhusayithi wokuhlola umthwalo (noma ezinye izinhlelo) nokuthola ukuthi bangaki abasebenzisi abangahambisanayo uhlelo olungabaphatha. Funda kabanzi '
I-Tsung iyithuluzi lokuhlola umthwalo olwavulwa ngomthombo ovulekile. Ingasetshenziselwa ukucindezela i-HTTP, i-WebDAV, i-SOAP, i-PostgreSQL, i-MySQL, i-LDAP, i-MQTT, ne-Jabber / XMPP amaseva. Funda kabanzi '
Ukuvinjezelwa kungukusetshenziswa kokuhlolwa kokulayishwa kwe-HTTP nokusetshenziswa kokulinganisa. Ukuvinjezelwa kusekela ukufakazela ubuqiniso okuyisisekelo, amakhukhi, ama-HTTP, ama-HTTPS nama-FTP protocols. Ivumela umsebenzisi wayo ukuthi ashaye iseva ngenombolo engalungiseka yamakhasimende alingisiwe. Funda kabanzi '
I-Httperf iyithuluzi lokulinganisa ukusebenza kweseva yewebhu. Inikeza indawo eguquguqukayo yokukhiqiza imithwalo yemisebenzi ehlukahlukene ye-HTTP nokukala ukusebenza kweseva. Funda kabanzi '
Noma ingahlobene ngqo nokuhlolwa kwePerf, iTaurus inikezela ngohlaka oluzisebenzelayo lokuhlola okuqhubekayo, kufaka phakathi ukusebenza nokusebenza. Funda kabanzi '
I-Artillery iyithuluzi lokuhlola umthwalo wesimanje, elinamandla nelisebenziseka kalula nethuluzi lokuhlola elisebenzayo. Yisebenzisele ukuthumela izinhlelo ezingahlukaniseki ezihlala zisebenza kahle futhi ziqinile ngaphansi komthwalo omkhulu. Funda kabanzi '
IGoad isebenzisa ngokugcwele amandla we-Amazon Lambdas yokuhlola umthwalo osatshalalisiwe. Ungasebenzisa i-goad ukwethula imithwalo ye-HTTP kusuka ezifundeni ezine ze-AWS ngasikhathi sinye. I-lambda ngayinye ingaphatha amakhulukhulu wokuxhumeka ngasikhathi sinye, ikwazi ukufeza imithwalo ephakeme engafika ku- Izicelo ezifanayo eziyizi-100,000 . Funda kabanzi '
ab iyithuluzi lokulinganisa uphawu lweseva ye-Apache Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yakho. Yenzelwe ukukunikeza umbono wokuthi ukufakwa kwakho kwe-Apache kwamanje kusebenza kanjani. Funda kabanzi '
ukubhala phansi ukufaka kuJava
umehluko phakathi kokulayisha nokuhlolwa kokusebenza
uhlu lwe-sql lwemiyalo ngesibonelo
Isifanekiso soHlelo Lokuhlola Ukusebenza
Ungayibonisa kanjani i-JSON ePython
Izibonelo eziqinisekiswe REST: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
Amathuluzi Okuhlola Okuzenzakalelayo Wokuhlola Izicelo ze-ReactJS
Uhlelo Lokuhlola i-Agile - Ingabe Siludinga Ngempela?
Izinsongo Zokuphepha kanye neVectors Attack
Ungawushintsha kanjani Usayizi Wewindi Yesiphequluli ku-WebDriver
I-Linux ls Command - Uhlu lwamafayela